Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Fizahan-tany vaksinina: tsara ve sa ratsy sa tsy miraharaha?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fahatarana lava na ny tsy fahampian'ny vaksinin'ny COVID-19 any amin'ny firenena sasany dia mitarika mpizahatany handeha amin'ny toeran-kafa.
Mampametra-panontaniana ny tsy fitoviana vaksinina ny fizahan-tany momba ny vaksiny.
Mampitombo ny fizarazarana eo amin'ireo manankarena sy ireo tsy manana tombontsoa manokana ny fizahan-tany momba ny vaksiny.
Ny olona manankarena indrindra any amin'ny firenena mahantra dia afaka mahazo vaksiny satria afaka mivezivezy izy ireo.
Ny fizahan-tany momba ny vaksinim-borona, izay iantsorohan'ny toerana fizahan-tany ankehitriny, dia manolotra vaksiny COVID-19 amin'ny fialan-tsasatra mba hisarihana ny mpitsidika, dia sabatra roa lela satria, na dia afaka manampy amin'ny famerenana ny dia aza izany, dia mampametra-panontaniana ihany koa ny fananana vaksiny satria hampitombo ny elanelana misy eo amin'ny ny manankarena sy tsy manana tombontsoa.
Ny fanadihadian'ny mpanjifa Q2 2021 an'ny indostria dia nahatsikaritra fa ny 6% amin'ireo mpamaly manerantany ihany no tsy niahiahy ny amin'ny fiantraikan'ny COVID-19. Ny 94% ambiny dia 'tena', 'somary' na 'somary' niahiahy. Miaraka amin'ny ahiahy mafy, ny fotoana hanaovana vaksiny dia nalain'ny maro. Ny fahatarana lava na ny tsy fahampian'ny vaksinin'ny COVID-19 any amin'ny firenena sasany dia mitarika mpizahatany handeha amin'ny toeran-kafa.
Ny olona manankarena indrindra any amin'ny firenena mahantra dia afaka mahazo vaksiny aloha satria zak'izy ireo mivezivezy. Nampiakatra ny hevitra fa ny firenena izay mandrisika ny fizahan-tany vaksinina dia mety hanome doka vaksin be loatra fa tsy hanome fidirana amin'ireo mpizahatany manankarena.
sasany US fanjakana, Russia, Maldives, ary Indonezia no sasany amin'ireo toeran-kaleha izay manome vaksiny an'ireo mpizahatany amin'izao fotoana izao. Ny masoivohon'ny fizahan-tany sasany dia nanararaotra nampiroborobo ireo fonosana fitsangatsanganana vaksinina ho fomba iray hampisondrotana ny vola miditra. Ao amin'ny Rosia, ohatra, telo herinandro fizahan-tany vaksinina fonosana misy vidiny eo anelanelan'ny $ 1,500 ka hatramin'ny US $ 2,500, tsy anisany ny vidin'ny tapakilan'ny fiaramanidina, ahitana vaksiny. Na izany aza, miaraka amin'ny toerana maro manerantany mbola miady amin'ny famoahana vaksin ambany, io dia mampiakatra ny fanontaniana momba ny fitoviana vaksiny.
Raha ny angom-baovao farany, ny Repoblika Demokratikan'i Kongo dia nanao vaksiny 3.5 isaky ny olona 1,000 tamin'ny 25 Aogositra 2021. Raha ampitahaina, dia namoaka dosie vaksinina 1,115 isaky ny olona 1,000 i Etazonia tamin'ny daty iray ihany. Ity fisongadinana ity dia efa misy elanelana lehibe eo amin'ny firenena samy hafa, ary maro no tavela.
Ny lafy tsara iray amin'ny fizahan-tany vaksinina dia ny mety hitana andraikitra lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsangatsanganana taorian'ny nandraisan'ny valanaretina COVID-19 ny lohaliny. Ny fiaingana iraisam-pirenena dia nihena -72.5% isan-taona (YoY) sy ny dia an-trano tamin'ny -50.8% YoY, raha ny angom-baovao farany. Mampiseho izany ny vokatra ratsy ateraky ny areti-mandringana ary ny antony itadiavan'ny toerana irina maneran-tany hamerina ny diany.